ဂိမ်းများ - ပလေးစတေရှင်, ဂိမ်းစက်, မိုဘိုင်းလီဂန်းစ်:ဘမ်းဘမ်
ဂိမ်းများ - ပလေးစတေရှင်, ဂိမ်းစက်, မိုဘိုင်းလီဂန်းစ်:ဘမ်းဘမ်း, PlayerUnknowns Battlegrounds, အန်းဂရီးဘတ်ဒ်, Warcraft III: Reign of Chaos, ပလေးစတေရှင်, ဒိုတာ ၂ ..
ပလေးစတေရှင် သည် ဆိုနီ ကွန်ပျူတာ ဖျော်ဖြေရေးမှ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိသော ၃၂ဘစ် အိမ်သုံးဗီဒီယိုဂိမ်းစက် အမျိုးအစား ဖြစ်သည်။ ၁၉၉၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့တွင် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် လည်းကောင်း၊ ၁၉၉၅ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် မြောက်အမေရိကနှင့် ဥရောပဈေးကွက်သို့ လည်းကောင်း အသီးသီးဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ပဉ္စမမြောက် ဂိမ်းစက်မျိုးဆက်အဖြစ် Nintendo 64 နှင့် Sega Saturn တို့နှင့် ခေတ်ပြိုင်ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဒီဇိုင်းပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသည့် ပိုမိုကျစ်လျစ်သေးငယ်သည့် ပလေးစတေရှင် မော်ဒယ် "PSOne"ကို ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ပလေးစတေရှင် ဂိမ်းစက်သည် ဖြန့်ချိပြီး ကိုးနှစ်ခွဲအကြာတွင် အရေအတွက် သန်း ၁၀၀ ကျော် တင်ပို့ရောင်းချနိုင်ခဲ့သည့် ...
ပလ စတ ရ င ဂ မ စက န က ထ က မ ဆက မ ပလ စတ ရ င ဂ မ စက ဖ စ ပ ယင စက တ င ပလ စတ ရ င ဂ မ စက အတ က ထ က ရ ထ သ ဂ မ မ အ လ က ကစ န င သည
ထ တ လ ပ သည လ အ မ ဆ ကစ န င သ အ န လ င တ က ပ ဂ မ Multiplayer online battle arena MOBA ဂ မ တစ ခ ဖ စ သည အဆ ပ ဂ မ က အန ဒရ က အတ က
Warcraft II: အမ င ဆ သ ဒ ရ မ အင ဂလ ပ Warcraft II: Tides of Darkness သည စ တ က ယဉ ဆန သ အမ န တကယ ဉ ဏ ဆင ရသည ဂ မ တစ ခ ဖ စ ပ Blizzard ဖ ဖ ရ မ
ဂ မ အမ အစ ဖ စ သည စစ မ ပ င တ င ကမ ဘ အရပ ရပ ရ ဂ မ ကစ သ မ န င အတ ကစ န င သ ဂ မ တစ မ ဖ စ သည ထ ဂ မ က ခ န စ က ထ က ရ ခ သ ဂ ပန ရ ပ ရ င
ဗ ဒ ယ ဂ မ တစ ခ ဖ စ ပ ဖင လန န င င ဂ မ ဆ ဖ ဝ လ ဖန တ သည ရ ဗ ယ ဖ ဖ ရ က မ ပဏ မ ဖန တ ခ သ ဂ မ တစ ခ ဖ စ သည အတ င မပ သ င က မ ပ မ
အဆ က အဦ မ ရ န မ သ အမ မ င န င မည ဖ စ သည ဂ မ ကစ န စဉ အတ င ကစ သ သည သယ ဇ တ မ က ရ ဖ ရမည ဖ စ သည မ မ ပ င ဘက မ က ခ ခ ရင စစ သ မ ထ တ ပ ခ င န င
န င င တက က မ က င အဆင ဂ မ ရ ဆ သ မ ထ တ လ ပ သ ဂ မ မ က န စဉ န ည အမ အဆက မပ တ အသစ တင ဆက မ မ က ပ ဆ င န င သ န ရ ဖ စ သည Steam ဂ မ ဈ က က တ င
ဖ ဖ ရ က မ ပဏ မ ဂ မ စက မ က န ပစ စည အမ တ တ ဆ ပ အမည ဖ စ သည ခ န စ ဒ ဇင ဘ လ ရက န တ င ပထမဆ သ ပလ စတ ရ င ဂ မ စက က ဂ ပန န င င
ဒ တ သည အခမ လ အ မ ဆ ကစ န င သ အ န လ င တ က ပ ဂ မ multiplayer online battle arena MOBA ဖ စ ပ Valve က ပ ရ ရ င မ ရ ဆ ထ တ လ ပ
အ မ သ ဗ ဒ ယ ဂ မ စက အင ဂလ ပ home video game console သ home console ဆ သည မ အ မ တ င သ ဗ ဒ ယ ဂ မ စက အမ အစ ဖ စ သည ဗ ဒ ယ ဂ မ စက န င
က မ မ က ဆ ဂ မ ပ တ အ မ လက စင က ပ န င င တ င က င ပပ လ ပ ရန ဖ စ သ လည အ ကစ က င မ တည ဆ က မ မ မပ စ သ သည အတ က မ န မ န င င အ
သည ဆ န လက အ က ခ က မ ပဏ တစ ခ ဖ စ ပ အ မ သ ဗ ဒ ယ ဂ မ စက မ ဂ မ ဆ ဖ ဝ လ မ က ထ တ လ ပ ဖ န ခ န သ က မ ပဏ တစ ခ ဖ စ သည ခ န စ
simulation ဗ ဒ ယ ဂ မ ဖ စ ပ တယ ဒ ဟ ဒ ဂ မ သ တ တစ တ အရည အသ မ င စ သ က ဆ င က င ဆက အထ တည ဆ က ရမယ စ သ က ဆ င မ ထ န ခ ပ မ အတ က ကစ သမ န ရ ဧပ လ
ယခ Square Enix မ Final Fantasy ဂ မ မ တ င တစ ဆယ ခ မ က အန ဖ င ရ သ ထ တ ဝ သ role - playing ဗ ဒ ယ ဂ မ တစ ခ ဖ စ သည ခ န စ တ င ဆ န
လက က င ဂ မ စက အမ အစ တစ ခ ဖ စ သည င သည ပလ စတ ရ င အ ပ စ ဝင ဂ မ စက အမ အစ တစ ခ ဖ စ ပ ပလ စတ ရ င ပ တ ဘ လ PSP န က ထ တ ဂ မ စက ဖ စ ပ သည
ဂ မ စက မ ဆက အဖ စ ဆ ဂ ဒရင ကပ စ မ က ခရ ဆ ဖ အ ပ စ ဘ က စ န င နစ တန ဒ ဂ မ က စက မ ဖ င ယ ဉ ပ င ခ သည ပလ စတ ရ င ဂ မ စက ပ င
အ မ သ ဗ ဒ ယ ဂ မ စက အမ အစ ဖ စ သည ပလ စတ ရ င အ ပ စ ဝင ပလ စတ ရ င န က ထ က မ ဆက သစ ဂ မ စက လည ဖ စ သည သတ တမမ က ဂ မ ဆက မ ဆက အဖ စ
အစဉ အလ အရ ပ ရ ဂ မ က ဆ ဂ မ အပ မ က င ပရသည ဇ လ င တ င မ န မ န င င က င ပသည SEAGFအစည အဝ တ င မလ ရ မ ဆ ဂ မ က လက ခ က င ပမည ဟ
အ င ဖ န န င အန ဒရ က မ ဘ င က ရ ယ မ အတ က ထ တ လ ပ ထ သ အ ရ ထပ လ ကစစ နည ပည ပ ဝင သည မ ဘ င ဂ မ တစ ခ ဖ စ သည ပ က မ န က မ ပဏ ဖရန ခ က စ
Among Us ဒ ဂ မ ဟ အမ ရ ကန ဂ မ စတ ဒ ယ InnerSloth မ ထ တ လ င ပ ခ န စ ဇ န ရက မ ထ တ လ င ပ ထ တ လ င ပ ထ တ လ င ခ တ အ န လ င ပ
strategy ဗ ဒ ယ ဂ မ တစ ခ ဖ စ သည င ဂ မ သည ဝင ဒ အတ က ဂ မ မ တ ဆ ပ အသ ပ မ က ပ လ ပ ရန ပထမဦ ဆ ခ င စဉ ဖ စ ခ သည င ဂ မ အဆက ဆန က င ဘက
အမ အစ ဂ မ ဖ စ သည Final Fantasy VIII အဓ ကဇ တ က င ဖ စ သည Squall သည အခ သ ဂ မ မ တ င လည ပ ဝင ခ သည ဥပမ အ ဖ င Kingdom Hearts ဂ မ စ ရ တ င
ရ ခ စတ ဂ မ မ တင သ င မည ဖ စ သည လ မည အ ပင ဝ အက ရ င စ န စ ခန ဗ ဒ ယ ဂ မ ဖ စ ပ သည ဂ မ သည Grand Theft Auto IV ဂ မ ထ တ လ ပ ပ
Computer Entertainment မ ထ တ လ ပ ဖ န ခ သ အ မ သ ဗ ဒ ယ ဂ မ စက အမ အစ ဂ မ စက တစ ခ ဖ စ သည ခ န စ ဖ ဖ ဝ ရ လ ရက န တ င ပ လ ပ သ
မ ဘ င လ ဗ ဒ ယ ဂ မ တစ ခ ဖ စ သည အ င အ အက စ အတ က ခ န စ ဩဂ တ ရက တ င ဖ န ခ ခ သည အန ဒရ က အတ က ကန ဒ န င ဖင လန န င င မ တ င ခ န စ
ဟ အမည ရသ ဂ မ သည န င င တက တ င ရ ပန အစ ဆ ဂ မ ဖ စ သည 9ယ က တစ ဖ သ လည က င တစ ဖ ယ က န ပ လက စ မ ပ ရသ ဂ မ ဖ စ သည ထ ဂ မ အ စတင ဆ ကစ ရန
အခ ဆ က ဆ ကစ စရ ဂ မ ကစ နည အပ ထည မ ထ တ လ ပ ရ င ခ သည က မ ပဏ ဖ စ သည ရ လ ဒ Relude အမည ဖ င ခ န စ တ င ဂ မ ထ တ လ ပ ရန စတင တည ထ င ခ ပ
အ ကစ ပ င ပ သည လ အ န င င ဗ ယင က န မ က င ပသ က မ မ က ဆ ဂ မ ပ ဖ စ သည လ အ န င င သည ပထမဆ အက မ အဖ စ လက ခ က င ပခ င ဖ စ သည
အရ တ င အ ရ အ ကစ ပ င ပ သည ထ င န င င တ င က င ပမည က မ မ က ဆ ဂ မ ပ ဖ စ သည က လ လမ ပ ပ တ တ င ခ န စ ပ တ က လက ခ က င ပရန
က မ မ က ဆ ဂ မ န င က မ မ က ပ ရ ဂ မ တ က က င ပခ င ရရန ယ ဉ ပ င မည ဟ က ည ခ သည ထ န က အခ က အလက မ က ထ င အ ကစ အ ဏ ပ င အဖ က
Steam ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတကာကျွမ်းကျင်အဆင့် ဂိမ်းရေးဆွဲသူများ ထုတ်လုပ်သောဂိမ်းများကို နေ့စဉ်နေ့ည အမြဲအဆက်မပြတ် အသစ်တင်ဆက်မှုများကို ပေးဆောင်နိုင်သောနေရာဖြစ်သည်။ Steam ဂိမ်းဈေးကွက်တွင် အခမဲ့ နှင့် ဝယ်ဆော့ရသောဂိမ်းဟု မျိုးရှိသည်။ ရာသီအလိုက် လျှော့ဈေးများလဲရှိသည်. ဂိမ်းအမြောက်အများကိုတစ်နေရာထဲတွင်ရနိုင်ခြင်း။ နေ့စဉ် update အသစ်မွမ်းမံမှုများပေးခြင်း။. အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးရန်လဲလိုသည်. မိမိ ဆော့သောဂိမ်းမှရရှိသောပစ္စည်းများ Items များကို ရောင်းနိုင်ခြင်း။ Steam Wallet ရှိရန်လိုအပ်သည်။.